Wariye Axmed Faarax Saakin oo maanta lagu aasay qabuuraha Laascaanood. – Radio Daljir
Oktoobar 24, 2012 3:09 g 0
Laascaanood, 24 ? ?Alle ha u naxariistee waxaa ?maanta oo (Arbaco) ah qabuuraha magalaada Laascaanood lagu aasay wariye Axmed Faarax Saakin, kaddib markii xalay fiidkii rag hubaysani ay toogteen.
Aaska wariyaha, waxaa ka soo qaybgalay suxufiyiinta magaalada Laascaanood iyo kuwo kale oo ka yimid deegaanno isla gobolka ah, iyo wax-ku-ool badan oo bulshada gobolka ah, waxaana marxuubkaasi rabbi looga baryey in uu Jannadii ka waraabiyo, halka maamulka gobolkaasna laga codsaday in ay gacan ka gaystaan soo qabashada ciddii falkaasi ka dambaysay.
Wariyaha maanta la aasay ee Axmed Faarax Saakin, ayaa u shaqaynayey TV-ga Universal, wakiillana uga ahaa gobolkaasi, waxaana dilkiisa gaystay sida Radio Daljir loo xaqiijiyey labo nin oo baskoolada ku hubaysnaa, kuwaasi oo goobta ka baxsaday markii ay dilkaasi fuliyeen.
Wariyaha, ayaa la dilay xilli uu ku sii jeeday guriga oo aan sidaasi uga durugsanayn meesha lagu toogtay, waxaana hadda socda baaritaanno lagu baadi goobayo ciddii dilkiisa gaysatay, sida maamul iyo wariyaal deegaanka ahiba noo xaqiijiyeen.
Dilalka wariyaasha Soomaalida ayaa sannadkii ugu dambeeyey dalka gudihiisa ka noqday wax joogta ah, waxaana sannadkaan oo kaliya la dilay in ka badan 10 wariye oo ka hawlgali jiray dalka.